လူငယ်တို့ရဲ့ရင်ထဲထိရှခဲ့ရတဲ့ Shawn Mendes ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် “Youth” – DigitalTimes.com.mm
လူငယ်တို့ရဲ့ရင်ထဲထိရှခဲ့ရတဲ့ Shawn Mendes ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် “Youth”
admin Jun 08, 2018
ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Shawn Mendes ရဲ့ “Youth” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးထွက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Shawn Mendes နဲ့ Khalid တို့ တွဲဖက်သီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ရင်ထဲတော်တော်ထိရှခဲ့ရတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လို့ ပြောရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒီသီချင်းလေးပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းရင်းလေးကတော့ ၂၀၁၇ မန်ချက်စတာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Ariana Grande ရဲ့ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကနေစခဲ့တာပါ။ ၂၂ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၁၀၀ လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုပါ။ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Shawn Mendes ကတော့ လန်ဒန်မှာရောက်နေခဲ့ပြီး လူအစုအဝေးထဲမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ ထပ်ရှိလာမှာစိုးတဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရက် ပဲရစ်စ်မြို့မှာကျင်းပမယ့်ပွဲကို ဖျက်ပြီး Khalid နဲ့အတူ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုသေဆုံးမှုတွေကြောင့် သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ဥပဒေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြုလုပ်ဖို့ လူငယ်တွေဦးဆောင်ဆန္ဒပြမှုတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အချိန် Mendes ရဲ့သီချင်းစာသားတွေက ဒီလူငယ်ထုကို မျှော်လင့်ချက်တွေရှေ့ဆက်တိုးနိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
“အပြင်လောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ညအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်တောင်ခက်ခဲတယ်။ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိဘူးလို့ခံစားမိပေမယ့်လည်း ရှေ့ဆက်တိုးရမှာပဲ”
“Pain, But I won’t let it turn into
Hate, No I won’t let it change me,
You can’t take my youth away,…….”
အစကတည်းက အရမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိ အရမ်းကိုထိရှစေတဲ့စာသားတွေက Billboard Music Award ပွဲမှာ special performance တွေနဲ့အတူ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကိုခံစားချက်တစ်ချို့ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆွံ့အသွားစေနိုင်တဲ့ performance လို့လည်း ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆုပေးပွဲမှာ ဒီ youth သီချင်းမထွက်ချင် ၂လလောက်အလိုတုန်းက ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Marjory Stoneman Douglas အထက်တန်းကျောင်းက ကလေးတွေနဲ့အတူ ဒီသီချင်းကိုစင်မြင့်ထက်မှာသရုပ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြလိုက်တဲ့ BBMA တုန်းက သရုပ်ဖော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲတစ်ခုခုမခံစားမိဘူးဆိုရင်တော့ ကြိုက်သလိုသာပြောပါတော့..
အောက်မှာတော့ Shawn Mendes နဲ့ Khalid တို့ရဲ့ “Youth” သီချင်းလေးကို အပြည့်အဝခံစားလိုက်ပါဦး….
Ref: Billboard, ShawnMendes YouTube Channel
ဒီနခေ့တျေလူငယျတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေိုတှနျးအားပေးနတေဲ့သီခငျြးတဈပုဒျအနနေဲ့ Shawn Mendes ရဲ့ “Youth” ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးထှကျရှိခဲ့ပါပွီ။ Shawn Mendes နဲ့ Khalid တို့ တှဲဖကျသီဆိုထားတာဖွဈပွီး ရငျထဲတျောတျောထိရှခဲ့ရတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျလို့ ပွောရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူး။
ဒီသီခငျြးလေးပျေါပေါကျလာပုံအကွောငျးရငျးလေးကတော့ ၂၀၁၇ မနျခကျြစတာမှာပွုလုပျခဲ့တဲ့ Ariana Grande ရဲ့ပှဲမှာ အကွမျးဖကျသမားတှေ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့တာကနစေခဲ့တာပါ။ ၂၂ယောကျသဆေုံးခဲ့ပွီး လူ ၁၀၀ လောကျထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့တဲ့ အကွမျးဖကျမှုတဈခုပါ။ အကွမျးဖကျမှုဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ Shawn Mendes ကတော့ လနျဒနျမှာရောကျနခေဲ့ပွီး လူအစုအဝေးထဲမှာအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျတာမြိုးတှေ ထပျရှိလာမှာစိုးတဲ့အတှကျ အကွမျးဖကျမှုဖွဈပွီးနောကျတဈရကျ ပဲရဈဈမွို့မှာကငျြးပမယျ့ပှဲကို ဖကျြပွီး Khalid နဲ့အတူ သီခငျြးတဈပုဒျဖနျတီးဖို့ တိုငျပငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလိုသဆေုံးမှုတှကွေောငျ့ သနေတျကိုငျဆောငျခှငျ့ဥပဒကေို တငျးတငျးကပျြကပျြပွုလုပျဖို့ လူငယျတှဦေးဆောငျဆန်ဒပွမှုတှမွေငျ့တကျလာနတေဲ့အခြိနျ Mendes ရဲ့သီခငျြးစာသားတှကေ ဒီလူငယျထုကို မြှျောလငျ့ခကျြတှရှေဆေ့ကျတိုးနိုငျစခေဲ့ပါတယျ။
“အပွငျလောကကွီးမှာဘာတှဖွေဈပကျြနတေယျဆိုတာ သိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ညအိပျပြျောဖို့အတှကျတောငျခကျခဲတယျ။ မြှျောလငျ့ခကျြသိပျမရှိဘူးလို့ခံစားမိပမေယျ့လညျး ရှဆေ့ကျတိုးရမှာပဲ”
အစကတညျးက အရမျးအဓိပ်ပာယျရှိ အရမျးကိုထိရှစတေဲ့စာသားတှကေ Billboard Music Award ပှဲမှာ special performance တှနေဲ့အတူ အားလုံးရဲ့ရငျထဲကိုခံစားခကျြတဈခြို့ထညျ့သှငျးနိုငျခဲ့ပွနျပါတယျ။ ဆှံ့အသှားစနေိုငျတဲ့ performance လို့လညျး ပွောလို့ရပါလိမျ့မယျ။ ဆုပေးပှဲမှာ ဒီ youth သီခငျြးမထှကျခငျြ ၂လလောကျအလိုတုနျးက ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့တဲ့ Marjory Stoneman Douglas အထကျတနျးကြောငျးက ကလေးတှနေဲ့အတူ ဒီသီခငျြးကိုစငျမွငျ့ထကျမှာသရုပျဖျောခဲ့ပါတယျ။ အောကျမှာဖျောပွလိုကျတဲ့ BBMA တုနျးက သရုပျဖျောဗီဒီယိုလေးကိုကွညျ့ပွီး ရငျထဲတဈခုခုမခံစားမိဘူးဆိုရငျတော့ ကွိုကျသလိုသာပွောပါတော့..
အောကျမှာတော့ Shawn Mendes နဲ့ Khalid တို့ရဲ့ “Youth” သီခငျြးလေးကို အပွညျ့အဝခံစားလိုကျပါဦး….
Physical Keyboard ပါတဲ့ BlackBerry Key2 ကို ကြေညာ
Xiaomi Mi 8 SE ကို ရောင်းပြီ
Huawei က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS ကို ဆောင်းရာသီ မတိုင်ခင် ဖြန့်ချီပေးနိုင်
Huawei ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုမှ စီအီးအို ဖြစ်သူ Richard Yu က ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Mobile OS ကို ဆောင်းရာသီ မတိုင်ခင်မှာ ဖြန့်ချီပေးမယ်လို့ ပြောကြောင်း သတင်းထွက်လာပါတယ်။ ဟွာဝေးကတော့ OS ကို ဖြန့်ချီမယ့်…
48MP နဲ့အတူ အနောက်ကင်မရာ လေးလုံးပါတဲ့ Honor 20 Pro ကို ကြေညာ
Honor က အလန်းစား ကင်မရာများ ပါတဲ့ Honor 20 Pro ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ 48MP Main Camera ဟာ လက်ရှိဖုန်းတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံး Aperture ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ OIS နဲ့ EIS…
အနောက်ကင်မရာ လေးလုံးပါတဲ့ Honor 20 ကို ကြေညာ
Huawei က Mobile Photography ကို ထူးခြားဆန်းသစ်အောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ရဲ့ ဘရန်းခွဲ Honor ကလည်း ဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက အနောက်ကင်မရာ လေးလုံးပါတဲ့ Honor 20 နဲ့ Honor 20 Pro တို့ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။…
Android Q Beta ရသွားတဲ့ OnePlus7နဲ့ One Plus7Pro
Ko Thuya - May 21, 2019
အနောက်ကင်မရာများကို ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားမယ့် Samsung Galaxy Note 10
Xiaomi Mi Mix35G ကို စပိန်နဲ့ အီတလီမှာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရောင်းမည်
၉၉၉ ဒေါ်လာတန် Augmented Reality မျက်မှန်အသစ်ကို Google မိတ်ဆက်
Nigma - May 21, 2019